That's so good, right?: L နဲ့ G များကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ
L နဲ့ G များကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ (How to Understand Gay and Lesbian People)
ကာလကြာရှည်ဆွဲကိုင်ထားတဲ့ အယူအဆတွေနဲ့ ဆန်းစစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့အတူ ရောထွေးမှုတွေမကင်းတဲ့ သံသယ အမြင်တွေကြောင့် ဘယ်လိုနားလည်မှုပေးနိုင်မလဲတွေးစရာပါ။ သင့်ရဲ့ စာရိတ္တမဏ္ဍိုင် (အကျင့်စာရိတ္တ) ကို လေးလေးနက်နက်တွေးတော ဆင်ခြင်ခြင်းဟာ လောကကျင့်ဝတ် လူသားကျင့်ဝတ်နဲ့ ညီညွတ်တဲ့ဘ၀ကို ဦးတည်ရာမှာ အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။။ လက်သင့်ခံဖို့ သင်အခက်တွေ့တဲ့တစ်စုံတစ်ရာကို နားလည်သယောင်မခံစားသင့်ပါ။ ကံအားလျော်စွာပဲ LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) လူအများစုကိုနားလည်ခြင်းက တကယ့်ကိုလွယ်ကူရိုးစင်းလှပါတယ်။
အများပြည်သူ သာမန်လူကဲ့သို့ကြည့်မြင်ပေးပါ (Seeing Gay and Lesbian People as People)
(၁) သူတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု လူ့ဇာတိ လူ့သဘာဝကို ဂရုပြု လေးစားပါ။ ဒီကိစ္စဟာ လိင်တူကြိုက် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကဲ့သို့သော သူများကို နားလည်မှုပေးနိုင်ခြင်းရဲ့ အရေးကြီးဆုံးသော အစိတ်ပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ထူးခြားကွဲပြားသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တွေ အမူအကျင့်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူတို့တွေဟာ ရည်မှန်းချက်၊ အိပ်မက်တွေ၊ စိတ်ဆန္ဒတွေကိုယ်စီနဲ့ ပြည့်နေကြပြီး အခြားသောသူတွေလိုပါပဲ သူတို့ ခံယူချက်တွေအတွက် ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေကြမှာဖြစ်သလို အင်မတန်ထူးခြားကာ ဆွဲဆောင်မှုရှိသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သာမန်လူတွေ (straight people) ကို နားလည်တယ်လို့ ခံစားရပါလျှင် လိင်တူကြိုက် အမျိုးသား (gay) နဲ့ လိင်တူကြိုက် အမျိုးသမီး (lesbian) လူတွေကို နားလည်မှုကောင်းစွာပေးနိုင်မယ့် လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
(၂) ပုံသေကားချပ် ပုံသေအမြင်တွေကို ပစ်ပယ်လိုက်ပါ။ လိင်တူကြိုက် အမျိုးသားနဲ့ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီးအချို့ကတော့ လူသိများ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ ပုံသေကားချပ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာ အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်နေကြပေမယ့် အချို့ကတော့ အသားမကျကြပါဘူး။ အများစုကတော့ အချို့သောပုံသေဖြစ်စဉ်တွေမှာ အသားကျကြတယ် အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ အချို့သော ပုံမှန်အမျိုးသား (straight people) တွေရဲ့ ပုံဟန်သွင်ပြင်ဟာ ဂေးဟန်ပေါက်နေကြသလို အချို့သော လိင်တူကြိုက်သူတွေရဲ့ ပုံဟန်သွင်ပြင်တွေကတော့ ပုံမှန်လူတွေရဲ့ ဟန်အတိုင်း ရှိနေကြတာပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုသဘောသဘာဝကို သူတို့ကိုကြည့်မြင်ပြီး၊ သူတို့စကားပြောဆို ဟန်တွေကို နားထောင်ပေးပြီး သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့ ပြောဆိုနေထိုင် ဟိတ်ဟန်ထုတ် အကျင့်အကြံတွေကိုစောင့်ကြည့်ရုံဖြင့် သေချာပေါက် ခန့်မှန်းပြောဆိုဖို့ မသေချာပါဘူး။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့ကိုကြည့်ရှုရုံ၊ သူတို့ဘယ်လို ဟန်ပန်နဲ့ စကားပြောတာကို နားထောင်နေရုံ၊ သို့မဟုတ် ထူးခြားသည့် ကျင့်ကြံပြောဆိုနေထိုင်မှုတွေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် သေချာသိ နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းမှမရှိတာ။ ပုံသေကားချပ်အမြင်တွေကိုစွန့်ခွာ LGBT လူစုကို လူတွေလို့ စတင်ကြည့်မြင်လိုက်တာနဲ့ပဲ လွယ်ကူစွာ ဖြင့် သူတို့အကြောင်းကို ပိုမိုလေ့လာသိရှိနိုင်ပါတယ်။
(၃) သင့်ရဲ့အတ္တကို ချုပ်ထိန်းပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အုပ်စုရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်စီတိုင်းကို စွဲလမ်းနှစ်သက် စိတ်ဝင်စားမှု မဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ လိင်တူကြိုက်လူစုအနေနဲ့လည်း မိမိကိုယ်ပိုင်လိင်အမျိုးအစားနဲ့ထပ်တူအုပ်စုရဲ့ အဖွဲ့ဝင်အယောက်တိုင်းစီကို စွဲလမ်း နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ စံပုံစံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဂေးတွေ စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ လိင်အမျိုးအစားပိုင်ရှင်ဖြစ်တာကြောင့် ဂေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သေချာနှစ်သက်သဘောကျမှာ သေချာတယ်လို့ တပ်အပ်မစွပ်စွဲပါနဲ့။ သူတို့ကဖြေပါလိမ့်မယ် ‘မဟုတ်ပါ’ လို့။
(၄) LGBTQIA လူစုတွေဟာလည်း အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ထားကြည့်ပါ။လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အရ လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူကိုမုန်းတီးတတ်သူများရဲ့ အစီရင်ခံမှုအရ သူတို့တွေဟာ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသားနှင့် လိင်တူကြိုက် အမျိုးသမီး လူစုတွေနဲ့ အပြန်အလှန်အကျိုးရှိတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတုန့်ပြန်မှုသိပ်မများခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ LGBT လူစုတွေကို နားလည်ဖို့ခက် တဲ့သူများကို ပေါင်းသင်းနေရတယ်လို့မထင်မှတ်ဘဲ သင့်လို သာမန်လူစုများကို ပြောဆိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံသလိုပဲ သဘောထား ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့တွေကို သာမန်လူစုတွေအတိုင်း မြင်ကြည့်လာနိုင်မှာပါ။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပဲလို့ သင်ယူဆနေဆဲဆိုရင်တော့ LGBT တွေအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ Documentary ဇာတ်လမ်းတွေကိုကြည့် သို့မဟုတ် တကယ့် gay အကျင့်စရိုက်လက္ခာတွေကိုပြဆိုထားတဲ့ တယ်လီဗေးရှင်း Show တွေ ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့် ဒါမှမဟုတ် စာအုပ်စာတမ်းတွေကို ဖတ်ရှုဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ။
(၅) ပူးပေါင်းအဖြေရှာတာမျိုးနဲ့ လေ့လာသမှုပြုကြည့်ပါဦး။ LGBTQIA လူစုတွေကို နားလည်သမှုပေးနိုင်ခြင်း နှင့် လိင်မတူသူများကိုသာ ကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ လူတွေ (heterosexual) ကပါ လက်ခံလာအောင် နည်းလမ်းအစုံနဲ့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများစွာ ရှိလာနေပါပြီ။ စာဖတ်သူနေထိုင်ရာအ၀န်းအ၀ိုင်းက PFLAG အခန်းကဏ္ဌနဲ့ပတ်သက်တာတွေ စူးစမ်း သို့မဟုတ် GLAAD ရဲ့ အင်တာနက် Websites တွေနဲ့ အချိန်အချို့ကိုအသုံးပြု သို့မဟုတ် Human Rights Campaign တွေမှာ အချိန်ကိုအကျိုးရှိအောင် အသုံးချကြည့်ပါ။
ရွေးချယ်တာမဟုတ် ဖြစ်တည်တာ (Realizing It’s NotaChoice)
(၁) လူအများစုပြောဆိုသုံးသပ်နေတာတွေကို သိပ္ပံနည်းကျ စူးစမ်းလေ့လာကြည့်ပါ။
တစ်သီးပုဂ္ဂလအချို့က လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကိစ္စကို ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ထပ်တလဲလဲပြောနေစဉ်မှာပဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို အဓိကထားလေ့လာနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးရဲ့ ထုတ်ပြန်ပြောဆိုရေးသားချက်တွေအရ သိသာထင်ရှားနေတာကတော့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကိစ္စမှာ ပြောင်းလဲမှုဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ အခိုင်အမာ ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ LGBT လူစုတွေကို ပြောင်းလဲပြုပြင်တဲ့ ကုထုံးလုပ်ဆောင်ချက်တွေဖော်ဆောင်ဖို့ကို ဆန့်ကျင်အောင် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါ ရောဂါကုထုံး အနေနဲ့ အမှန်တကယ်အားဖြင့် ထိခိုက်နစ်နာစေကြောင်း သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ ထင်ရှားပြတ်သားတဲ့ အကြံပြုနေတာတွေကို တုန့်ပြန်သောအားဖြင့် အမေရိကရဲ့ပြည်နယ်အချို့ မှာတော့ လိင်တူ “conversion therapy” ကိုတားမြစ်ထားပါပြီ။
(၂) ဂေးမလိုလားသူ (ex-gay) တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျလေ့လာ သုတေသနပြုကြည့်ပါ။
ဂေးမလိုလားသူလူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းတောင်မှ အချို့သောသူတွေဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းကိစ္စဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည် နေကြပါတယ်။ လတ်တလောနှစ်ကာလတွေမှာတော့ ဂေးမလိုလားသူ အဖွဲ့အစည်းများစွာဟာ ပြောခဲ့တဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မပြောဆိုမဆွေးနွေးကြတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လိင်တူကြိုက်လူစုတွေကို ပြုပြင်ကုသခြင်းဆိုတာ မလုပ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ ၀န်ခံလာရလို့ပါပဲ။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုလိုပါဘူး စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ လူတွေကို ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့် ကာမဆက်ဆံလိုစိတ်ရှိ(heterosexuality)သူများအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုခြင်းဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာချက်တွေလေ။ တနည်းပြောရရင် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကို ပြောင်းလဲဖို့ အလွန်အကျွံအားထုတ်တယ်ဆိုတာ နင့်နင့်နဲနဲ နစ်နာစေ တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လား။
(၃) တစ်စုံတစ်ယောက်အနေနဲ့ လိင်တူခြင်းကြိုက်သူအဖြစ် ဘာကြောင့်ရွေးချယ်လိမ့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်း တွေးဆကြည့်ပါ။
များလှစွာသော လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား(gay) နှင့် လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီး(lesbian) တွေဟာ သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုအကြောင်းပြုပြီး ဒုက္ခသုက္ခများစွာ ခံစားနေရခြင်းအဖြစ်အပျက်သည် LGBT အမေရိကန်တို့ဘ၀၌ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုမကတော့ဘူးဆိုပါတယ်။ ၄၀ % သော အိမ်ယာမဲ့လူငယ်များ သည်လည်းကောင်း၊ မိသားစုများရဲ့ ပစ်ပယ်လျစ်လျူရှုမှုကို အဓိကခံစားကြရသော ၆၈%သောသူများသည် လည်းကောင်း LGBT ဖြစ်ကြကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ LGBT လူငယ်တွေဟာ သာမန် heterosexual လူငယ်တွေထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဖို့ကြိုးစားတဲ့ အားထုတ်မှုအကြိမ် လေးကြိမ်လောက်ပိုမိုသောရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရမှု၊ ဆဲရေး တိုင်းထွာ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း ခံရမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရခြင်း စသည့် အလားတူအတွေ့အကြုံများစွာရှိကြပါတယ်။ ဂေးဖြစ်ခြင်း ကြောင့် တရားဥပဒေကင်းမဲ့စွာ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရခြင်း သို့မဟုတ် သေဒဏ်အဖြစ် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းပြုလုပ်သော တိုင်းပြည်များစွာရှိပါတယ်။ ဒီလောက်တောင် အလွှတ်မဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံရ ဥပဒေအကာအကွယ်အပြည့်မရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို စိတ်ထဲမှာအသာထား ‘ဘာကြောင့်များ ဒီလူစုတွေဟာ LGBT ဖြစ်ဖို့လမ်းရွေးချယ်ကြပါလိမ့်’လို့ သင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါလား။
အချစ်မေတ္တာအကြောင်း ဘယ်လိုပြောင်းတွေးမလဲ (Changing How You Think About Love)
(၁) အချစ်ဆိုတာနဲ့ လိင်ကိစ္စပဲလို့ နားလည်သဘောပေါက်မှုမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
သင့်အနေနဲ့ လိင်ကွဲကြိုက်နှစ်သက်သူ(straight) သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ စိတ်သဘောထားကောက်ကျစ်မှုတွေနှင့် အစွဲအလန်းကြီးမှုတွေ အကြောင်း မေးလေ့မေးထမရှိကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူတို့အကြောင်း ဘယ်လိုတွေးဆမိသလဲ သို့မဟုတ် သူတို့ကိုဘယ်လို ဆက်ဆံပြုမူမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းသာအဓိကကျပြီး အခြားအရာတွေက သင်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးလေ။ အရွယ်ရောက်ပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်ရာခန်းဆောင်ကိစ္စသဘောထား အကြိုက် အလိုက်အထိုက် ခံစားချက်တွေဟာ အဆိုပါလူရဲ့ လူသားဖြစ်တည်မှုကိစ္စအပေါ် နားလည်မှု ပေးရာမှာ လွှမ်းမိုးမှုမရှိရပါဘူး။ ဘာကြောင့် LGBT ဖြစ်နေသလဲဆိုခြင်းပြဆိုရာမှာ LGBT လူအများစုအတွက် လိင်ကိစ္စ(Sex) ဆိုတာ အလွန်သေးငယ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စအပေါ် သင့်အနေနဲ့ ဥပဒါန်ရောက်မနေသင့်ပါ။
(၂) လိင်တူကြိုက်(gay)သူများရဲ့ ချစ်မေတ္တာနဲ့ လူကြီး-ကလေး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု(pedophilia) ကွဲပြားခြားနားတာကို သင့်အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံရပါမယ်။ ဂေးလူစုတွေဟာ ကလေးတွေအတွက် အန္တရာယ်တစ်ခုလို့ မှားယွင်းတွေးထင်ထားခြင်းဟာ အတော့်ကို ယေဘုယျ ပျှမ်းမျှသဘောဆန်လွန်းပါတယ်။
ကံအားလျော်စွာပါပဲ အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာ ၁၉၇၀ပြည့်နှစ်များမှာ အမေရိကန် ပြည်သူများကို သဘောထားစစ်တမ်းကောက်ကြည့်ရာမှာ gay တွေဟာ လူငယ်လေးတွေအတွက် အန္တရာယ်လို့ ရှုမြင်ကြောင်း ၇၀%လောက် က ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာတော့ လိင်ကွဲကြိုက် အမျိုးသား(straight) ၁၉% နှင့် လိင်ကွဲကြိုက်အမျိုးသမီး ၁၀%ဟာ အထက်ပါယူဆချက် ကိုဆက်လက်ယုံကြည်သေးကြောင်း အဖြေပေး ပါတယ်။ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား (Gay) နဲ့ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီး (Lesbian) တွေဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ သို့မဟုတ် ချစ်ကြိုက် ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုပြုဖို့အတွက် စိတ်ဝင်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ် အရွယ်ရောက်ပြီး သူတို့နဲ့အသက်အရွှယ် မကွာဟသူများကိုသာ ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်ကပြောရရင် ကလေးတွေကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက်စော်ကားမှုပြုသူများစွာဟာ ဘယ်လိုအသက်အရွယ်ရောက်နေသူများ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုလိင်အမျိုးအစားရှိသူများကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက် သိပ်မရှိကြ ပါဘူး။ ၁၉၇၈ ခုနှစ် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၁၇၅ယောက်သော ကလေးလက်ရောက်မှုပြုကျင့်သူအမျိုးသားများဟာ လိင်တူကြိုက် gay များ မဟုတ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ အလားတူပါပဲ ၁၉၉၂ခုနှစ် ကလေးသူငယ်များကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးသော ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ၂၆၉ ယောက်မှာ ၂ယောက်သာလျှင် လိင်တူကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
မြောက်များလှစွာသော လေ့လာချက်များအရ လိင်တူဆက်ဆံခြင်း(gayness) နှင့် ကလေးသူငယ် လိင်အလွဲသုံးစားပြုမှု (child abuse)အကြား အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှု အနည်းငယ်ရှိမရှိ ရှာဖွေစူးစမ်းချက် မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
(၃) ကွဲပြာခြားနားသော ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ အမူအကျင့်သဘောထားများအကြောင်း လေ့လာစူးစမ်းကြည့်ပါ။
ဂေးမုန်းတဲ့သူအများစု (homophobic) အနေနဲ့ သူတို့ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားကို အခြေခံပြီး ငြင်းခုံလေ့ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် LGBT အပါအ၀င် လူအများစုကို လက်ခံတဲ့ ဘာသာတရားနဲ့ ဘာသာရေး ဂိုဏ်းဂဏများလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ United Church of Christ နဲ့ Unitarian Universalists တို့အပါအ၀င်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ ဟိန္ဒူများ၊ ဆစ်ခ် စသည့် အခြားသောအုပ်စုများမှာတော့ ကောင်းစွာ လက်ခံပေးဖို့ မျက်နှာသာပေးမယ့် နောက်လိုက်များနှင့် အခြားသောဆန့်ကျင်ငြင်းဆန်သူနောက်လိုက်များကြားမှာ အချေအတင်ပြောဆိုဖို့ အကြောင်းအရာတစ်ရပ်အဖြစ်တော့ရှိနေဆဲလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ Catholicism, Islam နဲ့ Orthodox Judaism လိုဘာသာတွေမှာ သူတို့ တကိုယ်ရည်နားလည်သလို ယုံကြည်သလို ဘာသာပြန်ပြီး ကိုးကွယ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ယုံကြည်သက်ဝင်မှုဟာ သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု ပေါ်မူတည်ပြီး အလိုရှိရာကို လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သင့်အနေနဲ့ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှု အတွက်နဲ့ လူတွေကို ကောင်းတာ ဆိုးတာ အကဲဖြတ်ဝေဖန်အပြစ်တင်တာ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ချင့်ချိန် ဆုံးဖြတ် တရားစီရင်ရေးကို ဘုရားသခင်ကသာ လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
(၄) မလုပ်နိုင်သေးသည့်တိုင်အောင် ဟန်ဆောင်သမှုပြုပါ။ သင့်အနေဖြင့် ဂေးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့ သက်သောင့်သက်သာမဖြစ် သေးဘူး သို့မဟုတ် ဂေးတွေကြောင့်စိတ်ရှုပ်နေရသေးတယ်လို့ဆိုသော်လည်း အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်များထားရှိပြီး တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲခြင်းရလဒ်တွေပိုင်ဆိုင်လာမှာပါ။ ကိုယ့်ကို ရိုသေလေးစားမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိ လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် ဆက်ဆံခံချင်တယ်ဆိုရင် တစ်ပါးသူကိုလည်း ထို့အတူပြုမူဆက်ဆံရပါတယ်။ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား (gay) နှင့် လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီး (Lesbian) တွေကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို အရေးတယူပြုမူဆက်ဆံပေးတဲ့အကျင့်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့ တွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလည်နိုင်မည့်နည်းလမ်းကိုတွေ့ရှိလာပြီး သင့်စိတ်ထဲ အထူးအဆန်းမဟုတ်သောလူသားများအသွင် မြင်လာပါလိမ့်မယ်။
အပြန်အလှန် သဘောထားပေးပါ (Interacting with Gay and Lesbian People)
(၁) သူတို့တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ (privacy) အဖြစ်နားလည်ပေးပါ။ သူတို့တွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ဖွင့်ဟ၀န်ခံခြင်းပြုမပြုဆုံးဖြတ်ချက် ဟာ သူတို့နှင့်သာသက်ဆိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်အသိတစ်ယောက်ကို လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား (gay) သို့မဟုတ် လိင်တူ ကြိုက်အမျိုးသမီး (lesbian) အဖြစ် သံသယ၀င်မိတယ်ဆိုသော်လည်း သူတို့ဖွင့်ဟ၀န်ခံခြင်းပြုဖို့ မေးမြန်းလမ်းကြောင်းပေးခြင်းမလုပ်ရပါ။ သူတို့မှာ သင်နဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့ ဆန္ဒရှိလာမယ်ဆိုလျှင် သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ အဆိုပါကိစ္စကိုဖော်ဆောင် သယ်ယူလာပါလိမ့်မယ်။
(၂) တစ်စုံတစ်ယောက်က သူသည် လိင်တူကြိုက် (gay) တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သင့်ကို ပြောလာတဲ့အချိန်မှာ ကြင်နာနုညံ့တဲ့ တုန့်ပြန်မှုကိုပြုမူရပါမယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖွင့်ဟ၀န်ခံခြင်းပြုခဲ့လျှင် “အော်….တကယ်ကြီးပေါ့?” “အား….အိုကေ” ဒါမှမဟုတ် “အင်း….ငါသိသားပဲ” ဆိုတာမျိုးတွေ မပြောပါနဲ့။ ဖွင့်ဟ၀န်ခံခြင်းသည် အထိတ်တလန့်နှင့် ထိခိုက်နာကျင်မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့အကြောင်း ဘယ်အစိပ်အပိုင်းကနေ သင့်ကို ဖွင့်ဟ၀န်ခံခြင်းအစပြုလာတယ်ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ ဒါဟာ သင့်အတွက် ယုံကြည်မှုရဲ့ ကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အပေါ်ယုံလွယ်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ သူ့အကြောင်း ကိစ္စရပ်တွေကို ဂရုစိုက်ပါကြောင်း သတိတရရှိဖို့ပြောပေးပါ။ တကယ်လို့သူက ဖွင့်ဟ၀န်ခံတဲ့ အကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆို ဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိပုံပေါ်လျှင် သင့်အနေနဲ့ “မင်းသိတာ ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ” သို့မဟုတ် “ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတာ တော်တော်ခက်ခဲ့တာပေါ့နော်” လို့မေးရပါမယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ သက်သောင့်သက်သာရှိဟန်မတူဘူးဆိုသော်“ဒါဆို မင်းက ယောက်ျားနည်းနည်းလောက်နဲ့ လိင်ကိစ္စပတ်သက်ပြီးပြီပေါ့?” မေးခွန်းမျိုးမမေးရပါဘူး။
(၃) LGBT လူအများဟာ သင့်ရဲ့ မေးခွန်းအားလုံးကို မဖြေချင်ကြဘူးဆိုတာ နားလည်ရပါမယ်။ ဘယ်လိုပဲ သာမန်လူအများက LGBT လူတွေရဲ့ ဘ၀အကြောင်းအရာများကို နားလည်ဖို့ အထောက်အကူပြုဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပါလို့ဆိုဆို မှန်းဆကူညီဖို့ လက်ကမ်းပါ တယ်ပြောပြော LGBT အချို့အနေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ချင်မှ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ လိင်တူကြိုက်သူဖြစ်နေတာနဲ့ပဲ LGBT + issues တွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ မဆိုလိုဘူးလေ။ အချို့သော လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား (gay) နဲ့ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီးတွေဟာ သင့်အတွက် သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ စိတ်မခုကြပေမဲ့ ကူညီရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သယောင် အခွင့်အရေးမယူသင့်ပါ။ လိင်တူကြိုက် အမျိုးသား (gay) တစ်ယောက်ဟာ သင်မေးမြန်းမယ့် မေးခွန်းအချို့ကိုဖြေကြားပေးမယ်လို့ ထင်မြင်ရပါက ယဉ်ကျေးချိုသာစွာ အမေးပြုရပါမယ်။ သူက မဖြေချင်ဘူးလို့ပြောလာပါက တလေးတစားနဲ့ နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရမှာပါ။
(၄) သူတို့တွေရဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကို အထောက်အပံ့ပြုပါ။ LGBT လူစုအနေနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို မျက်နှာခြင်းဆိုင်ရ နိုင်တယ်၊ အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရနေနိုင်တယ် (ချစ်ခင်အားကိုးမိပါတယ်ဆိုသော မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးဖြစ်နေပါသော်လည်း)၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းတီးမှု နဲ့အတူ မရေရာမသေချာမှုများစွာကို ခက်ခဲတဲ့ဘ၀အသွင် ပိုင်ဆိုင်နေရနိုင်တယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ဘ၀ရဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနေရပါလျှင် စာနာရိုင်းပင်းမှုနဲ့ လက်သင့်ခံခြင်းအမှု ကမ်းလှမ်းပေးကမ်းပါ။ သူတို့တကယ့်ကို လိုအပ်နေနိုင်ပါတယ်။
(၅) လျော်ကန်သင့်မြတ်သော ဘာသာစကားသုံးစွဲပေးပါ။
ပြောချင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်မလားတော့မသိဘူး ဒါပေမဲ့ ဂေးတွေသဘောမကျ မသုံးစွဲတတ်တဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေ သို့မဟုတ် အခြား LGBT ဆန့်ကျင်သူများ (anti-LGBTs) သုံးစွဲပြောဆိုတတ်တဲ့ ပြီးကပျစ် စကားတွေကို သင့်အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ မပြောဆိုသင့်ပါ။ LGBT လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ တိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဌ ကတော့ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား(gay) နဲ့ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီး (lesbian) လူစုတွေကို ညွှန်းဆိုတဲ့ စကားလုံး ၊ ဘာသာစကားတွေဟာ လေးစားသမှုရှိရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ LGBT လူစုကို ရည်ညွှန်းတဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့စကားလုံးအများအပြားရှိတာ သေချာပါတယ်။ စနစ်မကျသော သို့မဟုတ် ထိခိုက်ထိပါးသော စကားလုံးတစ်လုံးဟုတ်မဟုတ်မသေချာရင် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်စကားလုံး အသုံးကတော့ လျော်ကန်သင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ မသေချာရင် အထိအခတ်နည်းစေမယ်ယူဆတဲ့ စကားလုံးအသုံးကို အသုံးပြုပေးပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အရေးကိစ္စရပ်တစ်ခုကို အဆိုပါလူလောက် မသိနိုင်သော်လည်း မျှဝေခံစား စာနာစိတ်ထားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ အခြားသူရဲ့ အတွေ့အကြုံပေါ် ချိန်ဆတွေးတောတတ်တဲ့စွမ်းရည်ရှိသူအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကရဖြစ်လာစေမှာပါ။ လူတစ်ယောက် ဖိနပ်ပြတ်သွား တယ်ဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ် ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမှာလဲ ဒါမှမဟုတ် ဆက်ဆံပြုမူရမှာလဲ မသေချာရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။ “ငါသူအခုအချိန် ဖိနပ်ပြတ်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ?”ဆိုတာမျိုးပေါ့။ သင့်မှာရှိတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်သာဆက်ဆံပတ်သက်လိုစိတ် ရှိခြင်း (heterosexuality) သို့မဟုတ် လိင်ကွဲကြိုက်နှစ်သက်သူ (straight) ဖြစ်ခြင်းက လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား(gay) နှင့် လိင်တူကြိုက် အမျိုးသား(lesbian) အများစုမှာမရှိတဲ့ အားသာချက်တွေအဖြစ် ဘ၀ကပေးအပ်ထား ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု သဘောပေါက်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ LGBT တွေကို ဆန့်ကျင်လိုတဲ့ တယူသန်စိတ်တွေကြောင့် LGBT လူအများစုရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သင့်အနေနဲ့သိထားရပါမယ်။ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ အခြားသူတစ်ယောက်ကို အမှန်တကယ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုပါလျှင် သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုနာကျင်မှုမျိုးကိုမှ ပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသင့်ပါဘူး။
(၁) ကျမက လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီး (Lesbian) တစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီး (Lesbian) တစ်ယောက်နဲ့ သူငယ်ချင်း အဖြစ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံချင်ပါတယ်။ ပြဿနာရှိနိုင်ပါသလား?
ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးလုံးကြိုက်နှစ်သက်သူ (bisexual) ၊ လိင်သတ်မှတ်ချက်မရှိ (pansexual) ၊ လိင်အမျိုးစားစုံကြိုက် နှစ်သက်သူ (polysexual) အဖြစ်ဖော်ထုတ် ရွေးထုတ်ထားသူ သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုအပေါ် တံဆိပ်မတပ်လိုသူများလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ အကျိုးအကြောင်းဆီလျော်ညီညွတ်ပါကြောင်းဖြေလိုက်ပါတယ်။
(၂) gay ဖြစ်နေကြသူတွေကြောင့် လူအများစု ပျော်ရွှင်မှုခံစားကြရပါ့မလား?
သင့်ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်ဟာ ပျော်ရွှင်မှုအပေါ် ရိုက်ခတ်သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ Gay လူထုဟာ လူထုအသွင်ဖြစ်ဆဲပါ။ သင်ဟာ အခြားသော လိင်ကိုစိတ်ဝင်စားသလိုပဲ သူတို့တွေဟာလည်း စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်မချမ်းသာခြင်း သို့မဟုတ် gay ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံခံကြရလို့ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခြင်းဆိုတာတွေကို မည်ရွေ့မည်မျှပဲ ဖြစ်ဖြစ် သတိပြုနိုင်ကြပါတယ်။
(၃) ကျနော့် gay သူငယ်ချင်းက ကျနော့်ကို crush နေရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျ။ ကျနော်က မိန်းကလေးတွေကိုပဲကြိုက်တာ။
သင့်အပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်ခံစားချက်အပေါ် အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း နားလည်ပါကြောင်း သူတို့သိပါစေ။ ပြီးတော့ အဆိုပါခံစားချက်တွေ အပေါ် သင့်အနေနဲ့ ပြန်လည်မတုန့်ပြန်နိုင်ပါကြောင်း ယဉ်ကျေးချိုသာစွာပြောပြပါ။ ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ သူနဲ့သူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်တည်ရှိနေစေချင်သေးကြောင်းလည်းပြောပါ။
(၄) Gay ယောက်ျားတစ်ယောက်က မိန်းမတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ပြီး ကလေးယူနိုင်ပါ့မလား?
ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်ထားပြီး ကလေးအများကြီးရှိတဲ့ gay များစွာရှိပါတယ်။
(၅) သူတို့ရဲ့သားတွေထဲကတစ်ယောက်ဟာ gay ဖြစ်ကြောင်းတွေ့သွားတဲ့ မိဘတွေကို ကျနော်ဘယ်လိုအကူအညီပေးရမလဲ?
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သူတို့ရဲ့သား ဂေးဖြစ်နေခြင်းသည် ပြဿနာမဟုတ် အဆင်ပြေပါကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်အောင် ကူညီပညာပေးပါ။ ခေါင်းခဲစရာကိစ္စရပ်ကြီးတစ်ခုအသွင် သင့်အနေနဲ့ဟန်မူပြ မဖော်ဆောင်သင့်ပါဘူး။ (တကယ်တမ်းလည်း ဟုတ်မှ မဟုတ်တာ)
Alex Aung (2 Feb 2017)
Posted by Alex Aung at 1:51 PM